ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ် - Internet Service
ကြာသာပတေး, 2019-06-27, 5:35 AM
မင်္ဂလာပါ ဧည့်သည် | RSS
Welcome to our online service !!!
Main | အသင်းဝင်ရန် | Login
သမီးရိုသေလေးစားစွာဖြင့်စာရေးလိုက်ပါတယ်။မေမေ နေကောင်းရဲ့ လား။
သမီးကတော့အခုနေကောင်းနေပါပြီ။ မေမေကတော့ စိုးရိမ်မှာပဲ ဘယ်တုန်းက နေမကောင်းဖြစ်တာလဲဆိုပြီးပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလ လောက်တုန်းက သမီးခေါင်းတွေ အရမ်းမူးတယ် မေမေ။ ဒါလည်း စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ဆေးမှားသောက်မိလို့ ပါ။
ဆေးမှာသောက်မိတာကလည်း စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးမေမေ။ ပါတီမှာတွေ့ တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က အချိုရည်ထဲ ဆေးထည့် တိုက်လို က်လို့ ပါ။
ဒါလည်း စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး မေမေ။ ကိုယ် အိပ်ပျော်နေတဲ့ အချိန် ဘာတွေဖြစ်တယ် ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်မှ မသိတာ။
စိတ်မပူပါနဲ့ မေမေ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုလည်း ဘာမှမရှိပါဘူး။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကုတင်အောက်မှာ သမီးရဲ့လုံချည်တွေ အကျီ င်္အဝတ်အစားတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မပျောက်မရှ ပြန်တွေ့ တယ်လေ။
ပြီး တော့ အဲဒီကောင်လေးက သဘောကောင်းတယ်မေမေ။ သမီးကို ခဏခဏ အပြင်ခေါ်ပြီး အချိုရည် တွေ တိုက်တယ်။ပြီးတော့ ဟိုတယ်လည်း ခဏခဏခေါ်ခေါ်သွားတယ် မေမေ။
ဝမ်းမနည်းပါနဲ့ မေမေ။ သမီးလေ ဟိုတယ်ခ တွေ စားသောက်စရိတ်တွေ မကုန်တဲ့ အပြင် သူက သမီးကု ... အဆုံးထိဖတ်လိုလျှင် ဒီမှာ »
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 1252 | Added by: 7nternet | Date: 2013-07-08 | Comments (0)
တနင်္ဂနွေနေ့လေး နေမြင့်အောင်အိပ်ရမလားမှတ်တယ် စောစောစီးစီးကို ဖုန်းမြည်လာတယ်လေ။ Silent လုပ်ပြီးမအိပ်မိတော့ ခု ဇိမ်ပျက်ရပြီ။ နံပတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်း တခါမှ မမြင်ဘူးဘူးဖြစ်နေတယ်။
သန်း တာနဲ့ရောပြီး ဖုန်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်...
"ရန်ကုန် စမ်းချောင်းက ကိုသန်းထူး ကိုသိတယ်မလား”
"အင်း…သိတယ်၊ ဘာလဲ သူ ဆုံးပြီလား”
"အာ…မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်က သူညီဝမ်းကွဲလို့ ပြောမလို့ ပါ”
"ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော်က အလုပ်လာရှာတာ၊ ကိုဖိုးကျော်ဆီဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်တာ အကူအညီတောင်းဖို့ မှာလိုက်လို့”
အေပေး သန်းထူး၊ ဒုက္ခပေးဖို့တော့ သတိရရှာသား။ ရုံးပိတ်ရက်လေးတရက်တော့ မနားရဘဲ အလုပ်ရှုပ်အုံးတော့မယ်။
"အင်း…ဒါနဲ့ မင်းက အခု ဘယ်မှာလဲ”
"ဘာကွ…ဟေ့ကောင် နောက်တာလား? ”
"မနောက်ပါဘူး ခင်ဗျ၊ ကိုဖိုးကျော်မေးလို့ ဖြေတာပါ”
"မင်း စင်္ကာပူမှာဆိုတာတေ ... အဆုံးထိဖတ်လိုလျှင် ဒီမှာ »
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 866 | Added by: 7nternet | Date: 2013-06-04 | Comments (0)
Facebook မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် share ထားတာလေးပါ .. သဘောကျ လို့ တင်လိုက်တာပါ..
အမေ ။ ။ လုံးဝ သဘောမတူနိင်ဘူး ..
ငါတို့က ကိုယ့် Post ကိုယ့် Note နဲ့ နေတဲ့ မျိုးရိုးအေ့ ။
သူတို့လို ဟိုကဒီကနေ လမ်းဘေး Copy တွေကို
Credit မပေးပဲ ခိုးချနေတဲ့ မျိုးရိုးနဲ့ လုံးဝ သဘောမတူနိင်ဘူး ..
သမီး ။ ။ မဟုတ်ပါဘူး.. အမေရယ်
သမီး ကောင်လေးက Share ပဲ လုပ်တာပါ ..
အမေ ။ ။ အိုအေ .. Share ပဲလုပ်လုပ် ဘာပဲလုပ်လုပ်
Post တခုတောင် လက်ကြောတင်းအောင် မတင်နိင်တဲ့
အကောင်နဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ သဘောမတူနိင်ဘူး ...
အဖေ ။ ။ ဟုတ်တယ် သမီး .. သမီး ကောင်လေး ဟိုတခါ
ဖေဖေ့ Post အောက်မှာလည်း ဝင်ဆဲသွား သေးတယ် ။
အကို ။ ။ ဒီမှာ ညီမလေး .. ဒီကောင်က ကုပ်ကမြင်း ..
Wall ပေါ်မှာ ဘုရား ဘုရား ၊ Chat Box မှာ ကားယားကားယားလုပ်နေတဲ့ ကောင် .. ။ နင် ဒီကောင်နဲ့ မပတ်သတ်နဲ့ ။
အမေ ။ ။ မဖြစ်ဘူး .. မဖြစ်ဘူး ။ ညည်းကို ငါ့ မိတ်ဆွေ Page Admin ရဲ့ သားနဲ့ မြန်မြန် Relationship လုပ်ခိုင်းမှ ဖြစ်တော့မယ် ။ မနက်ဖြန် ကျရင် သူတို့ တမိသားစုလုံးက အကောင့်တွေကို ညည်း Add ထားရမယ် ။ ဒါပဲ ။
အကို ။ ။ြ ... အဆုံးထိဖတ်လိုလျှင် ဒီမှာ »
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 653 | Added by: 7nternet | Date: 2013-05-31 | Comments (0)
ဆေးကျောင်းသားဆိုတဲ့ သူတွေဟာ အင်မတန့် ကို
ရည်ရွယ်ချက်ကြီးပြီး… သူတို့ လိုချင်တဲ့ ပညာတစ်ခုရဖို့ဆို
ဘာမဆိုလုပ်ဝံ့တဲ့… ဇွဲလုံ့ လရှိတဲ့… သူတွေပါ။ ဒါကိုက သူတို့ရဲ့
အားနည်းချက်လို့ဆိုရမလားပဲ…။
ရင်ခွဲရုံမှာ ပထမဦးဆုံး လက်တွေ့ ဆင်းရတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ ပေါ့။
ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အားလုံးကလည်း ခွဲရ စိတ်ရတော့…မယ်ဆိုတော့ တအားကိုပဲ
ပျော်ကြ ရွှင်ကြ စိတ်အား ထက်သန် နေကြတာပေါ့။ သူတို့ တစ်ဖွဲ့ သားလုံးရဲ့
ရှေ့မှာလည်း ခွဲစိတ်ခံမယ့် အလောင်းကောင်ကြီးက မလှုပ်မယှက်… ငြိမ်သက်လို
အားလုံးလိုက်လုပ်ရမယ့် လက်တွေ့ သင်ခန်းစာ မစခင်မှာ ပရော်ဖက်ဆာက
ကျောင်းသား အားလုံး သိရမယ့် အချက်နှစ်ချက်ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပါတယ်။
"ပထမ အချက်အနေနဲ့ … … … အဟမ်းအဟမ်း…”
ကျောင်းသာတွေရဲ့ အာရုံ စူးစိုက်မှုရအောင် တစ်ချက် ဝေ့ ကြည့်လိုက်ပြီးမှ
"ရင်ခွဲရုံမှာ… ခွဲတော့ စိတ်တော့မယ်ဆိုရင်… မင်းတို့ မှာ…
ရွံတတ်တဲ့စိတ်ရှိလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူး”
ဒီစကားကို လက်ညှိုးတစ်ထောင်ထောင်နဲ့ ပြောနေရင်း… ရုတ်တရက်ဆိုသလိ ... အဆုံးထိဖတ်လိုလျှင် ဒီမှာ »
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 1350 | Added by: 7nternet | Date: 2013-05-29 | Comments (0)
ရတနာပုံ တယ်လီပို့မှ တစ်ခါ Click လုပ်ပီးလျှင် သုံးနှစ် အိပ်လို့ရသော ကွန်နက်ရှင်တစ်မျိုးကို ဆန်းသစ်တီတွင်လိုက်ြပီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်မှာ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှ စတင်သုံးစွဲခြင်း မရှိသေးပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပထမဦးဆုံး တီတွင်ခဲ့သော မြန်နှုန်းနိမ့် ကွန်နက်ရှင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မြန်နှုန်းနိမ့် ကွန်နက်ရှင်ကို တီတွင်ခဲ့သော ရတနာပုံတယ်လီပို့မှ အိုင်တီ ပညာရှင် ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရာတွင် " ကျွန်တော်တို့ ဒီလို ဘယ်နိုင်ငံကမှ စတင်အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကို အသုံးပြုနိုင်တာ ဂုဏ်အရမ်းယူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီလို ကွန်နက်ရှင်ကို ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့ တော်တော်လေး အချိန်ကုန် ငွေကုန်ခံပြီး လူအပင်ပန်းခံ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ဂင်းနစ်စံချိန်တောင် ချိုးဖျက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အချိန်အတော်ကြာကြာ ဒီစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်မယ့် နိုင်ငံပေါ်လာမယ်မထင်ပါဘူး" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး အိုင်တီ ပညာရှင် ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ က မြန်မာလူမျိုးများအတော် များများမှာ ဂျီတော့နှင့် ဖေ့ဘွတ်ခ်သာအသုံးပြုကြသဖြင့် အဆိုပါ နှစ်ခုသာ ၀င်နိုင် ... အဆုံးထိဖတ်လိုလျှင် ဒီမှာ »
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 690 | Added by: 7nternet | Date: 2013-05-28 | Comments (0)
တိုးတက်လာသော မြန်မာ့ ဘန်းစကားများ
အောက်ပါဝေါဟာရများကို ၁ ကြိမ်စီအသုံးပြု၍ စာစီကုံးပါ
ကျော်ကျော် သည် *ဂိုက်ပေးကြမ်း * သောလူ *ပွေး *၁ ယောက်ဖြစ်သည်။
မူမူသည်*ရေလျှံ* သည့်အပြင် *လန်ထွက်* နေသော သူဋ္ဌေးသမီး ၁ ဦးဖြစ်သည်။
စတိတ်ရှိုး ၁ခုတွင်* ဖလမ်းဖလမ်း* ထနေသောမူမူကို ကျော်ကျော်* ခိုက် *
သွားပြီး *ငုတ်တုတ်မေ့* သွားသည်။
ထို့နောက် ကျော်ကျော်သည် ရည်းစားဟောင်းအမကြီး ၁ ဦးထံမှ *ကျော်*ထားသော
ဖုန်းဖြင့် မူမူကို * ကြူ* တော့သည်။
မူမူကလဲ သူငယ်ချင်းများက *အရောက်ပို့ * သောကြောင့် ကေ ... အဆုံးထိဖတ်လိုလျှင် ဒီမှာ »
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 703 | Added by: 7nternet | Date: 2013-05-28 | Comments (0)
ခေတ်ပေါ် မြန်မာ အီဒီယမ် စကားလုံးများ
၁ ပုလင်း=၁ သောင်း
၁ ပုံး= ၁ သိန်း
ကျွတ်တယ်= ကြောက်တယ်။ လန့်တယ်။
ကျွေးလိုက်ရ= ချလိ်ုက်ရ။ ဆော်လိုက်ရ။ ထိုးလိုက်ရ။
ကက= (အနက်မပြန်လိုပါ) မကောင်းသောမိန်းမ။ မိန်းခလေးများ ကိုယ့်ကို ထိုသို့အခေါ်ခံရလျှင် ချစ်စနိုးနှင့် ညည ဟု ခေါ်သလိုမျိုးဟု မထင်လိုက်ပါနှင့်။ ပါးလှည့်တီးထည့်လိုက်ပါ (စကားချပ်)
ကြောင်းသည်= လိုက်စကားပြောသည်။ လမ်းကြောင်းထွင်သည်ဟု အနက်ယူ။ (ဥပမာ- ငါဟိုကောင်မလေးကို လိုက်ကြောင်းလိုက်ဦးမယ်)
ကူလီကူမာ = မကောင်းကြံစည်ခြင်း။
ကြပ်သည် = အနဲငယ် ချောက်တွန်းလိုက်သည်။ တိုင်သည်။ ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်သည်။ ဥပမာ ငါဟိုကောင်ကို နဲနဲကြပ်ပေး လိုက်ဦးမယ်။
ကျွတ်ကျဲ= ကြောက်လန့်သွားခြင်း ။ အသံကြားရုံမျှနှင့် ကြောက်လန့်သွားခြင်း (မောင်မောင်၏ ဗလကို မြင်ရသောအခါ မမမှာ ကျွတ်ကျဲသွားလေတော့သည် (မည်သို့ကြောင့်မှန်း မောင်နတ် မသိ)
ကလော်တုတ် = ပြင်းပြင်းထန်ထန် အော်ဆဲသည်။ (အေ..ဘယ်ရမလဲ ငါဒင်းကို ကလော်တုတ် ပစ်လိုက်တာပေါ့.. ဟင်း)
ကလိန်ကကျစ် = သူတစ်ပါး ဒုက်ခရောက်အောင် ... အဆုံးထိဖတ်လိုလျှင် ဒီမှာ »
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 1271 | Added by: 7nternet | Date: 2013-05-28 | Comments (0)
မ ယုံ နဲ့ 
၁၉၅၀ ခုနှစ်က မော်စကိုမြို့ တွင် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပသည် ။ ဈေးဝယ်လာသူများကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆက်ဆံရန်နှင့် မရှိဘူး ဆိုသော စကား လုံးဝ မပြောရဟု ဆိုင်အားလုံးကိုညွှန်ကြားထားသည် ။ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက် စတိုးဆိုင်သို့ဝင်လာသည် ။ အရောင်းသမကို
" ကျမရဲ့ ဆောင်းဝတ်ရုံနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ လက်အိတ် ၀ယ်ချင်ပါတယ်.. "
အရောင်းသမက ပြန်ပြောသည် ။
&n ... အဆုံးထိဖတ်လိုလျှင် ဒီမှာ »
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 610 | Added by: 7nternet | Date: 2013-05-28 | Comments (0)
ရှာ ကြည့် ပေါ့
အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် သေသွားသည် ။ လူ့ ဘ၀မှာတုန်းက ဘုရားကို အယုံအကြည် မရှိသူဖြစ်ခဲ့သဖြင့် သေသောအခါ အပါယ်ငရဲသို့ရောက်သည် ။ သို့ သော် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်အနေနှင့် အလွန်တော်သောသူ ဖြစ်သည် ။
ထို့ ကြောင့် ရောက်ပြီး မကြာခင် ခေတ်မီ လေအေးပေးစက်များ ၊ ရေပေးစနစ်များ ၊ အခြားပစ္စည်း
များ တပ်ဆင်ကာ ငရဲပြည်ကို နေချင့်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက်သည် ။
ဤအကြောင်းကို သီကြားမင်း ကြားသောအခါ ထိုအင်ဂျင်နီယာကို နိဗ္ဗာန်သို့ခေါ်ယုရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ သူ့ တွင် ဘုရားကို မယုံတာကလွဲရင် ဘာ ဒုစရိုက်မှု မှ မရှိဟု သိကြားမင်း သိ၍လည်းဖြစ်သည် ။ သို့ သော် အင်ဂျင်နီယာကို လက်လွှတ်ရမည်ကို ငရဲမင်း နှမြောသည် ။ ထို့ ကြောင့် သိကြားမင်း၏ တောင်းဆိုချက်ကို ၄င်း လစ်လျှူ ရှုလိုက်သည် ။ သိကြားမင်း ... အဆုံးထိဖတ်လိုလျှင် ဒီမှာ »
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 635 | Added by: 7nternet | Date: 2013-05-28 | Comments (0)
Category: အမောပြေ ရယ်စရာလေးများ | Views: 541 | Added by: 7nternet | Date: 2013-05-28 | Comments (0)
Copyright MZ Computer © 2019 Createafree website with uCoz